Varimi Vokurudzirwa Kungwarira Zvirwere Zvinobata Mombe Nguva Ino Yekunaya
VaZhou vanoti mombe dinobatwa nezvirwere zvakawanda munguva ino yekunaya kwemvura, zvinosanganisira January Disease.
Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi, reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, VaZivaishe Zhou, vari kuyambira varimi kuti vangwarire zvirwere zvinobata mombe dzavo munguva ino yekunaya.
VaZhou vanoti kune zvirwere zvakawanda zvinobata mombe munguva yekunaya, asi chirwere chavari kunyanya kutarisa nezvacho muhurukuro yedu ndechiya chinonzi January Disease, icho vanoti chinokonzerwa nezvikwekwe zvidukuduku zvinonyanyowanikwa munzeve dzemombe.
Vanoti kune mishonga yakasiyanasiyana inobatsira kuwrisana nechirwere ichi, uyevo murimi anogona kudzivirira mombe dzake kuti dzisabatwa nechirwere ichi kuburikidza nekudzidhibhisa, kudzimwaya mushonga pamusana kana kudzibaya.
Asi VaZhou vanokurudzira varimi kuti vashandise hunyanzvi hwevarimisi kana madhumeni vari munharaunda dzavo kuitira kuti vabatsirwe nekukasika.
Hurukuro naVaZivaishe Zhou
Mbudzi 22, 2020
Sangano reCoomunity Working Group on Health Ropa Dzidziso Pamusoro peCovid-19
Sangano reCommunity Working Group on Health riri kukwanisa kupinda mumaruva kuburikidza nemabhasikoro arakapiwa nesangano reWorld Bicycle Relief.
Mukuru wesangano reCoomunity Working Group on Health, VaItai Rusike, vanoti sangano ravo riri kushanda mumatunhu akawanda emunyika richidzidzisa vanoita zvehutano munharaunda pamwe vechidiki pamusoro pekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19, avo vanozodzidzisawo vamwe.
Izvi zvinouya panguva iyo matunhu anoti Bulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South ari kusangana nedambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere kubva mwedzi wapera.
VaRusike vanotiwo sangano ravo riri kushandawo mumatunhu anoti Manicaland, Masvingo neMidlands, uko vari kubatana nanambuya hutano mukupa dzidziso kuti veruzhinji vazive nzira dzekudzvirira kupararira kwedenda iri.
Sangano reCommunity Working Group on Health riri kukwanisa kupinda mumaruwa kuburikidza nemabhasikoro arakapiwa nesangano reWorld Bicycle Relief.
Asi vanoti kuti nyika ibudirire kudzivirira kupararira kwehutachiwana hunokonzera chirwere ichi, hurumende pamwe nemakanzuru zvinofanirwa kuona kuti vanhu vawaniswa mvura kayachena yekushandisa kugeza maoko pamwe nekuzvishambidza, uyewo vari kukurudzira veruzhinji kuti vachengetedze mitemo yakatarwa nebazi rezvehutano pamwe neWorld Health Organisation.
Asi VaRusike vanoti kana hurumende yakazofunga kutora matanhu ekurambidza veruzhinji kufambafamba, haifanirwe kubva yavhara nyika yose sezvakamboitika pakutanga, sezvo vazhinji vevanhu munyika vachirarama nekuzviitira mabasa emaoko.
Mbudzi 02, 2020
VaShona Vari muKenya Vanosvitsa Magwaro eNyunyuto kuParamende neSeneti Kuti Vawaniswe Magwaro eKugara muNyika iyi
Hurumende yeKenya yakatanga nekupa vana vemhuri yevaShona ava magwaro ekuberekwa. (mufananidzo naIshe Joshua Kimemia)
Mhuri yevaShona inogara muKenya masvondo maviri adarika yakafora ichinosiya magwaro enyunyuto kumatare eparamende neseneti, senzira yekuedza kuti matare aya apindire mukuona kuti hurongwa hwekuwanisa mhuri iyi magwaro hwakasika kufambiswa nehurumende.
Mumwe wevakuru vemhuri iyi, VaOliver Muregerera, vanoti vakatora danho rekunosiya magwaro kuparamende iri senzira yekusunda nayo hurumende yeKenya kuti ipedzise basa rekuti vawaniswe magwaro emuKenya, uye vanoti vakatambirwa zvakanaka chose nematare maviri aya.
VaMuregerera vanoti vamirira kunzwa kuti kugara kwavachaita mumatare avo vanozobuda nemhinduro dzinoti kudii, asi vachiti zvinenge zvave nekakujeka zvishoma kuti pamwe vangakwanise kuwaniswa magwaro.
Vanoti nguva yekunyoresa kuti vawane magwaro yakanga yatarwa nehurumende yakanga yapera, ndizvo zvakaita kuti zvinhu zviite sezvakanga zvave kudzokera kumashure.
“Sakana ndopatakazosimudzira kuti tirwise nekuona kuti kuti tidzingirirane ne time limit kuti tirhinyuwe patsva, takaona kuti zvingatitorere nguva, sakana takaona kuti zvitori nani kuti titore petisheni kuti tinoiisa ku parliament neku senate.
“Riri zano ratakaona kuti ringaite kuti zvinhu zvingatirerukirewo kuti hurumende ikurumidze kutiseenzera basa iroro,” vanodaro VaMuregerera.
Vanoti hurumende pari zvino yakakwanisa kupa vana magwaro ekuberekwa kuitira kuti vakwanise kuenderera mberi nedzidzo yavo.
VaMuregerera vanotiwo kubva patanga hurongwa hwekuti vawaniswe magwaro, havasati vasanganawo nedambudziko pakutengesa zvigadzirwa zvavo sezvavaisimboita kare vachishungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi pamwe nemapurisa.
Vanotiwo kunyange hazvo dambudziko rechirwere cheCovid-19 riri kukwira muNairobi, rinove guta guru reKenya mavagere, hapana wemhuri dzavo ati abatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino.
Kuwaniswa magwaro kwevana vemhuri iyi uku kunotevera danho rakatorwa nehurumende yeKenya gore rapera, rekutanga kupa mhuri iyi, iyo ine vanhu vanodarika zviuru zvina, magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi, asi yakatanga nekupa magwaro ekuzvarwa kuvana vadiki.
Mhuri yevaShona iyi yanga yave nemakore anodarika makumi mashanu nematanhatu ichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti ndeyavo, sezvo vakanga vasina magwaro.
Rudzi rwevaShona urwu rwakatanga kupinda muKenya mugore ra1962 rwuchitungamirirwa naVaJohanne Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yeJohanne Masowe.
Varume gumi nevaviri vakatanga kupinda munyika iyi vakasvikira mudunhu reNgong, vakazoita mhuri dzavo nekuzotama vachinogara kuKiambaa mudunhu reKiambu pasi paIshe Joshua Kimemia, uko vachiri kugara nanhasi.
VaMuregerera vanoti chikuru chakaita kuti madzibaba avo agare muKenya kutambirwa zvakanaka kwaakaitwa nevakave mutungamiri weKenya wekutanga, VaJomo Kenyatta.
Hurukuro naVaOliver Muregerera
ZINATHA Yokurudzira Veruzhinji kuMhan'garira N'anga Dzinoti Dzinorapa Dzichishandisa Nhengo dzeMunhu
Zimbabwe National Traditional Healers Association, ZINATHA
Svondo rapera nyika yakamuka ichinzwa nezvenyaya yekufa kwemwanakoma ane makore manomwe, Tapuwa Makore, uyo aigara mudunhu rekwaMukarakate pasi paIshe Mangwende kwaMurehwa.
Chakazonyanya kukatyamadza vanhu ifiro inonzi yakaita mwana uyu, yekupondwa, uye kudimurwa-dimurwa kwenhengo dzemuviri wake nemhondi dzinofungidzirwa kuti dzaida kuzotengesa nhengo idzi kune dzin'anga kana vanamuzvinabhizimusi.
Chinotsamwisa pamwe nekusuvisa ndechekuti pamhondi idzi pane murume wemakore makumi mana Tafadzwa Shamba, uyo anofungidzirwa kuti ane chekuita nekuurayiwa kwemwana uyu.
Mapurisa anoti murume wemakore makumi mana uyu mufudzi wemombe weimwe mhuri inogara mubhuku rimwechete nemhuri yemukomana uyu.
Pane fungidziro yekuti Shamba nevamwe vake vakapamba mukomana uyu kubindu kwaakange aenda vakamuchengeta mune rimwe gomo kusvika hwave usiku apo anofungidzirwa kuti akazomuuraya achishanda nedzimwe mhondi dzinonzi nemapurisa dzichiri kutsvagwa.
Mushure mekuponda mwana uyu, imwe yemhondi idzi inofungidzira kuti yakazotora musoro wemwana uyu yakaenda nawo kwaJuru, uko kunonyanyozivikanwa sekwaBhora, mushure mekuvimbisa mufudzi wemombe uyu mari inoita madhora ekuAmerica chiuru nemazana mashanu.
Pane fungidziro yekuti mhondi idzi dzaishanda nemumwe muzvinabhizimusi kana n'anga, vanogona kunge vakati dzitsvage nhengo dzemwana mudiki.
Mubvunzo uri pamiromo yevanhu vakawanda ndewekuti mukore uno kuchine vanhu vari kutsvaga kupfuma vachishandisa mishonga? Mishonga ine ropa remunhu?
Munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association, ZINATHA, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, vanoti sangano ravo hari bvumidze nhengo dzaro kushandisa ropa remunhu.
Sekuru Sibanda vanoti kana kuchine n'anga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhan'gara kumapurisa nekukasika.
Ko handiti vakuru vakati "Kupfuma ishungu?" Hazvirevi kuti unoita shungu dzekupfuma nekudeura ropa remunhu. Hupenyu hwemunhu hunokosha kuraswa nenzira yakadaro.
Hurukuro naSekuru Prince Mutandi Sibanda
Gunyana 11, 2020
Chii Chinoita Kuti Vakawanda Vanoshaira Kunze Kwenyika Vade Kuradzikwa Kumusha?
Nyanzvi yezvehutano hwepfungwa uye magariro evanhu, Doctor William Guri vanoti zviri kune zvizvarwa zvenyika dzakawanda zviri kunze kwenyika zvekuti zvovigwa kunyika kwazvigere here kana kuti kwazvinobva kana zvashaya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya zviri kunze kwenyika zviri kuzowanikwa zvichida kunoradzikwa kumusha kana zvichinge zvazoshaya.
Mhuri dzevafi dzakataura neStudio 7 dzine chitsama dzinoti dziri kutora matanho ekuendesa mitumbi kumusha senzira yekuzadzisa zvido zvevafi, vamwe vanenge vakasiya vataura kuti vanoda kunoradzikwa kumusha, kuchitiwo vamwe vanenge vachinzi vakasiya vanyora magwaro anotaura kwavanoda kuzoradzikwa.
Asi hurongwa hwakadai hakusi kuremedza mhuri yasara here kana vehukama, avo vachaunganidza mari dzinenge dzichidiwa kuendesa mutumbi kumusha?
Imwe nyanzvi yemagariro pamwe nehutano hwepfungwa, inoti zviri muvanhu vakawanda vanobuda kunze kwenyika kuti kana vakazoshaya vanoda kunovigwa kumusha kwavakabva.
Doctor William Guri, avo vanoshanda nevana vechikoro, vadzidzisi pamwe nevabereki muzvikoro zvekuEngland, vanoti havasi vari kunze kwenyika chete vanoda kunoradzikwa kumusha kana vachinge vashaya, asi kuti kana hama dziri kumusha dzinodisa kwazvo kuti hama inenge yatsakatikira kumarimuka idzoke kumusha izochengetedzwa pamwe nevamwe vehukama nedzinza.
Vanoti vanhu havafanirwe kukanganwa kuti vari kunze vakaenda kunoshava kana kuvhima, saka vanogarako vaine gadziriro yekuti nerimwe zuva vachadzokera kumusha.
Vanoti hazvisi zvizvarwa zveZimbabwe chete zviri kunze kwenyika zvinoda kunovigwa kumusha, asi kuti kana zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zvinofira kunze zvinoda kunovigwa kunyika kwazvinobva.
"Hazvisi zvizvarwa zveZimbabwe chete zvinoda kunovigwa kumusha kana zvichinge zvashaya zviri kunze kwenyika. Vakawanda vari kunze kwenyika dzavo vanoda kuzovigwa kunyika dzavanobva kana vashaya vari kunze kwenyika dzavo."
Doctor Guri vanoti kunyange hazvo zvichidhurira vasara kuendesa mutumbi kumusha, hurongwa uhwu hunopa kugadzikana kune vehukama vasara, pamwewo nemufi, kuti aradzikwa kune vedzinza rake.
Hurukuro naDoctor William Guri